शारीरिक सम्बन्ध राखिसकेपछि किन सुत्छन् पुरुष ? - Experience Best News from Nepal
शारीरिक सम्पर्क लाई सबैभन्दा राम्रो व्यायाम पनि मानिन्छ । तर प्रायः पुरुष शारीरिक सम्बन्ध राखिसकेपछि थकान महसुस गर्ने गर्छ । केही पुरुषहरु भने शारीरिक सम्पर्कपछि सुत्न मन पराउँछ । वर्तमान समयमा तनाव र व्यस्त दिनचर्याले गर्दा पनि थकान महसुस हुनुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ ।
जानी राखौं, पुरुषहरु शारीरिक सम्बन्धपछि किन थकान महसुस गर्छन स् हार्मोनका कारण शारीरिक सम्बन्धपछि थाक्नु र सुत्न मन पराउनुका वैज्ञानिक कारणहरु पनि छन् । शारीरिक सम्बन्धपछि पुरुषमा हुने आक्सिटोसिन हार्मोनको स्राव र प्रोलेक्टिनको स्रावका कारण थकान महसुस हुन्छ ।
शारीरिक सम्बन्धपछि पुरुषमा हार्मोनको स्राव बढेपछि आरामको अनुभव हुने र निन्द्रा आउने हुन्छ । शारीरिक सम्पर्कको समय हुनतः शारीरिक सम्बन्ध रातीको समयमा राखिन्छ । त्यसपछि सुत्ने समय पनि हुन्छ । दिनभरिको थकानलाई हटाउन शारीरिक सम्बन्धलाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
यसले तनाव हट्नुका साथै आरामको पनि महसुस हुन्छ शारीरिक सम्बन्धपछि पुरुषहरु शारीरिक सम्पर्कका बेला चरम आनन्दमा पुगेपछि थकान महसुस गर्ने गर्छन । जबकी महिलाहरु त्यसपछि पनि पुरुषको माया चाहन्छ ।
तर पुरुषले त्यतिबेला महिलाको भावना नबुझेर निदाउँछ । धेरै क्यालोरी खर्चिनु शारीरिक सम्पर्क राखिसकेपछि महिलाको तुलनामा पुरुषको क्यालोरी धेरै खर्च हुन्छ ।
जसले गर्दा आन्तरिक रुपमा थकान बढ्न जान्छ र सुत्न बढि मन पराउँछ । तनाव हट्ने हुनतः शारीरिक सम्पर्कलाई राम्रो निन्द्राको लागि पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
शारीरिक सम्बन्धले थकान र तनाव दुबैलाई हटाउन मद्दत पुग्छ । निन्द्रा लाग्नु राम्रो शारीरिक सम्बन्धपछि शरीरमा रहेको हार्मोनको स्राव हुनुलाई राम्रो मानिएको छ । यसको अर्थ शारीरिक सम्पर्क सम्बन्धि कुनै पनि रोग नहुनु पनि हो । शारीरिक सम्पर्कपछि थकित हुनु र निन्द्र लाग्नुलाई नराम्रो भन्न सकिदैन् ।
धेरै बेरसम्म होइन शारीरिक सम्बन्धपछि पुरुषहरुका अँगलाई आराम चाहिन्छ । जसले छिट्टै निदाउने पनि गरिन्छ । हुनतः थकान धेरैबेरसम्म रहँदैन । पुरुषले चाहे थकान माथि नियन्त्रण पनि गर्नसक्छ । त्यसपछि आफ्नो से क्स पार्टनरलाई खुशि बनाउन सकिन्छ ।
नियमित शारीरिक सम्पर्कले रोग प्रतिरोधी क्षमता कसरि राम्रो हुन्छ ? यसो भन्छ डक्टर